Dil ka dhacay Deegaanka Mareer Gur | KEYDMEDIA ONLINE
Dil ka dhacay Deegaanka Mareer Gur
Dilka hal ruux oo dhimirka looga jiro ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Mareer Gur oo hoostagta caasimadda Dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Wararka naga soo gaaraya xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxay sheegayaan in xalay uu dil ka dhacay halka loo yaqaan Mareer Gur oo ka tirsan Dhuusamareeb.
Dilkan loo geystay marxuumka ayaa dhacay xalay waxaana lagu magacaabi jiray Tima-Jilic Haarey, waxaana la dilay xilli uu ku xirnaa geed, iyadoo uu meesha ka baxsaday qofkii geystay falkan dilka ah.
Ciidamada ammaanka ayaa wada baaritaano la xiriira ciddii geysatay falkan naxdinta leh ee lagu khaarajiyay qof dhimirka la' oo geed ku xiran, deegaanada hoos yimaada Galmudug waxaa ka dhacaya weeraro ay dad ku dhinteen.
Toddobaad ka hor weerar miino ayaa lagu laayay askar iyo shacab kaddib miino la dhigay waddada dhinaceeda, sidoo kale bartamihii bishii ina dhaaftay aabbe iyo wiilkiisii ayaa tooray isku dhuftay bartamaha magaalada kuwaasoo loola cararay isbitaalka, waxaa haatan xiisad colaadeed ay ka jirtaa qeybo kamid ah tuulooyin ay isku hor fadhiyaan maleeshiyo beeleedyo maalmihii u dambeeyay iska dilay in kabadan 10 ruux.
Ma jiro wax war ah oo ay maamulka deegaanka iyo kan Galmudugba ka soo saareen dilakan xalay dhacay, madaxweynaha iyo wasiirka amniga Galmudug ayaa ku maqan safar dibadda ah.